Meheraddaadu ma ka dhigaysaa mid ka mid ah Khaladaadkaan Caan ka ah Warbaahinta Bulshada? | Martech Zone
Meheraddaadu ma ka dhigaysaa mid ka mid ah Khaladaadkaan Caan ka ah Warbaahinta Bulshada?
Axad, Nofeembar, 16, 2014 Axad, Nofeembar, 16, 2014 Douglas Karr
Maaddaama xeeladaha warbaahinta bulshada ay sii socdaan, aaladaha gorfeynta ayaa soo hagaagaya, waxaana sii layaabayaa waxa shaqeeya iyo waxa aan shaqeynin - Inta badan uma sheego dadka inay wax qabanayaan khalad baraha bulshada. Maxaa khalad ku noqon kara waqtigeyga waxay noqon karaan istiraatiijiyad weyn oo adiga ku saabsan. Waxay kuxirantahay inta badan waxay dhagaystayaashaadu filayaan iyo inaad fulineyso rajadaas.
Taasi waxay tiri - waxaa jira aasaasiyaal aasaasi ah oo ganacsi kasta ay tahay inuu maanka ku hayo iyo Jason Squires waxay qabatay shaqo adag oo ay ku muujinayaan iyaga halkan ku yaal sawir-gacmeedkan.
Waa kuwan 5 qalad ee ugu sarreeya - akhri infographic inta ka hartay!
Diiradda saaraya tirada dadka raacsan oo tayo leh
Ku darista buuq
Fidinta naftaada aad u dhuuban
La'aanta a shakhsiyadda
Ma aha beddelidda kuwa raacsan
Tags: khaladaadka warbaahinta bulshada ee ganacsigajason squiresqaladaadwarbaahinta bulshadakhaladaadka warbaahinta bulshada